Arsenal Oo 14 Sannadood Ka Dib Man United Ku Garaacday Old Trafford, Aubemayang Oo Isku Qoray Buuga Taariikhda Gunners & Solskjaer Oo Shaqadiisa Loo Baqayo | Kaafi News
Arsenal Oo 14 Sannadood Ka Dib Man United Ku Garaacday Old Trafford, Aubemayang Oo Isku Qoray Buuga Taariikhda Gunners & Solskjaer Oo Shaqadiisa Loo Baqayo
Arsenal ayaa 14 sannadood ka dib markii ugu horeysay waxay Manchester United ku garaacday garoonkeeda Old Trafford kualn horyaalka Premier League ah iyagoo ku badiyay 1-0 ciyaar xiiso badan oo ay soo bandhigeen.
Goolka kaliya ee Arsenal ku badisay waxa uu ahaa rigoore uu saxiixay kabtankooda Aubameyang kaasoo noqday xiddigii ugu horeeyay ee Arsenal ee rigoore ku dhaliya Old Trafford horyaalka Premier League.
Gunners waxaa ugu danbeysay inay Old Trafford ku badiyaan kulan horyaalka ah sannadkii 2006 iyagoo haatan gaaray guul weyn oo sarre u sii qaadeysa hamigooda xilli ciyaareedkan iyagoo soo galay 8aad iyagoo leh 12 dhibcood halka Man United ay ka dhacday kaalinta 15aad iyadoo shaqada tababare Solskjaer ee Old Trafford ay halis ku jirto.
Tababare Solskjaer ayaa ka qoomameeyay shax ciyaareedka dheymanka ee uu ku soo shirtagay ka dib markii ay kooxdiisa ku guuldareysatay inay saameyn weyn ku yeelato ciyaarta qeybteedii hore.
Gunners ayaa qeybtii hore aheyd kooxda ciyaar fiican iyagoo helay fursadaha ugu fiican halka Man United ay ku guuldareysteen inay isfaham khadka dhexe ah yeeshaan.
Xiddiga Arsenal Willian ayaa birta garaacay halka Saka uu helay fursad madax oo gool loo fishay balse uu shabaqa kor mariyay iyadoo Man United fursadii kaliya ay heshay ay aheyd mid Leno ka badbaadiyay Greenwood.
Man United ayaana heshay kaliya halkaas darbo qeybtii hore ee ciyaarta, waana darbadoodii ugu yareyd ee qeyb hore ee ciyaar Premier League ah tan iyo markoo eber darbo loo diiwaangeliyay kulan ay la ciyaareen Man City bishii October 2015.
Qeybtii labaad tababaraha reer Norway Solskjaer ayaa bedelay shax ciyaareedka kooxdiisa isagoo u bedelay 4-2-3-1 iyadoo Bruno Fernandes lagu soo celiyay booska No.10.
Inkastoo United ay labadii daqiiqo ee ugu horeysay qeybta labaad si fician ku bilaabatay hadana Arsenal ayaa fursadii ugu horeysay ee qeybta labaad heshay daqiiqadii 52aad markii Lacazette uu soo jiiday kubad ay dhiibteen Man United isagoo kubada u dhigay Aubameyang oo boos fiican u taagnaa inuu dhaliyo laakiin waxay kubad si ciriir ah ku hareermartay goolka.
Arsenal ayaa ugu danbeyn heshay hogaan ay u qalantay ka dib markii Paul Pogba uu cagta uga istaagay Bellerin iyagoo xerada ganaaxa kuwada jira, garsoore Mike Dean ayaana tilmaamay gool ku laad.
Waxaa rigoorada u soo istaagay kabtan Pierre-Emerick Aubameyang kaasoo dhinac qaldan u diray goolhaye De Gea islamarkaana hogaanka u dhiibay Gunners.
Aubameyang ayaa dhaliyay goolkiisii ugu horeysay ee Premier League 551 daqiiqadood uu horyaalka ciyaaray.
Pierre-Emerick Aubameyang ayaa isku qoray buuga taariikhda Arsenal isagoo noqday xiddigii ugu horeeyay ee Arsenal ee rigoore ku dhaliya Old Trafford horyaalka Premier League, iyadoo labadii jeer ee hore ee ay Arsenal rigoore ku heshay garoonkaan horyaalka Premier League ay qasaariyeen Robin van Persie (2011) iyo Gilberto Silva (2006)
Tababare Solskjaer ayaa ciyaarta oo 15 daqiiqo ay ka harsan tahay wuxuu bedel ku soo geliyay Edinson Cavani iyo Van de Beek kuwaasoo bedelay Mason Greenwood iyo Bruno Fernandes.
Halka tababare Arteta uu isna bedelay xiddig si adag u shaqeeyay kulankii caawa Lacazette isagoo soo geliyay da’ yarka Nketiah.
10kii daqiiqo ee ugu danbeeyay Man United ayaa bilowday inay weerar qaado iyagoo cadaadis saarayay Arsenal kuwaasoo iyagana iska caabin muujiyay islamarkaana difaacanayay goolkooda.
Man United ayaa ku dhawaatay daqiiqadii 84aad inay hesho goolka barbaraha markii darbo ka baxday Van de Beek uu si xun u taabtay Mohamed Elneny taasoo keentay inay wajiga uga dhacdo goolhaye Leno ka hor inta aysan birta goolka ku sii dhicin.
Arteta ayaa ciyaarta oo dhiman seddex daqiiqo wuxuu sameeyay bedel waqti dhumis ah islamarkaana uu natiijada ku difaacanayay isagoo bixiyay Aubameyang iyo Willian, wuxuuna soo geliyay Mustafi iyo Maitland-Niles.
Waxay ciyaarta ku soo dhamaatay 1-0 oo ay Arsenal ku garaacday Manchester United.